Author: Shaktijin Vizilkree
Kanaafuu fakkeenyaaf, wanti Waaqayyo fayyina Addaamii fi Hewaaniif gaafatee, Ilma dubartii takkarraa dhalatu yeroodhaaf seexanni akka miidhu, garuu immoo dabaree Isaa Inni seexana guutummaan guutuutti akka moo’atu akka amanan ture Seera Uumamaa 3: Itti aansees Mishinarii Wangeelaa Iswiidin Swedish Evangelical Mission biratti Wangeela barachuuf carraa argatee iddoo Imkulluu jedhamutti wangeelas barate.
Qaroominnii fi seenaan addunyaa isheen biyya lafaatiif gumaachitu bal’ina isheetiin qulqulluk walitti dhufuu miti.
Inni waldaa Addunyaawaa amantoota yeroo pheenxeqoosxi duraa fi yeroo ol-butamuu booddee irraa garaa-garummaa jiru addaan baafamee beekamuu qaba, sababiin isaas Inni karaa adda-addaatiin adda waan ta’eefi; isaan keessaas warri gurguddoon: Ol-butamuu Waldaa kiristaanaatiin booda, yeroon turtii waggaa torbaa Orommoo Guddaa jedhamee waamamu in jalqaba Daani’eel 9: Yesuus Waaqayyo HafuuraYohaannis 4: Inni wanta addatti yaadatamuu qabuudha, ta’ullee Waaqayyo Phexroosiin warra Yihudootaatiif Phaawuloosiin immoo warra Ormaatiif waamullee Galtaatiyaa 2: Oduu Itoophiyaa Viidiyoo Jajjaboo.
Nuuf garuu Waaqayyo tokkichatu jira, Innis Abbaa Qulqulluu waan hundumaa uume, Isa nuyi maqaa isaatiif jiraannusi. Sababni isaas waanti akkana kun garagarummaa waggaa fiduu waan danda’uuf.
Jaalala ummanni Oromoo isaaf qabuu fi Afaan Oromoon barsiisuun isaa warri qeesotaa Durbee Maaramii arrabsa jedhanii akka himmannaa irratti banan godhe. Sababni isaas waan akka geengoo tookko irratti tuqaa kam irraa jalqabne lakkoofna akka jechuutii.
Haalota akkamii keessa darbuutu isaaf ta’a? Haalli jireenya Isaa jireenya uumama kan biraa wajjin walitti dhufeenya kan qabu miti Uma. Waldootiin kiristaanaa naannoo dhaabbatoota, itti gaafatamootaa fi wantoota ofii isaanii balaa irraa ittiin of-ittisan walitti dhufeenya baratamoo hin taane keessa kan hin jirre qabu.
Yachid jecha Ibraayisxii isa yeruma hundaa tokkichummaa ibsa. Macaafin Qulqulluun garuu odeeffannoo walfaalleessu wayii kan hin qabneedha. Dhagni Waliigalaa Kiristoos bara pheenxeqoosxii kaasee hamma guyyaa ol-butamutti amantoota dhugaa hunda irraa kan walitti ijaaramedha.
Ergaa sanaammoo kaanee Ji’a sagalii fi guyyaa shan yoo itti idaane muddee 29 irra geenya. Inni mataa waldaa kiristaanaati. Ol-butamuun battalatti, hamma liphisuu ijaa yommuu ta’u, yerichatti dhagnoonni keenya, kanneen amma dadhabootaa fi dhukkuba, du’aafi tortoruudhaaf sababa ta’an, yeros kan hin dadhabne, humnaan kan guutamaniif kan hin duune mavaafa ta’u 1Qorontos Tokkoffaa addaddummaa waggaa torbaa fi ji’a saddeetii fi sa’atii kudhanii qaba. Wantoota kanneen Inni akka dhufanii darbaniif fedha qabu hundumaa abboomuuf Inni Aboo kan qabuudha Faarsaa 2: Sanarraa kaanee hanga fulbaanaa yoo lakkoofne ji’a torbaffaarra geenya ,kanaafuu qeesichi cubbuu namootaaf kan dhiifama gaafatu ji’a fulbaanaa keessa jechuudha.
Inni dabalataanis karaa ergaawwaniitiinis waldootii kiristaanaa naannoo tajaajileera, akkasumas immoo Innii fi gareewwan isaa fedhoota adda waldoota kiristaanaa qunnamuudhaan gargaaraniirus.
Onesmoos Nasib – Wikipedia
Inni seexana Daabiloos diduu, akka jireenya isaattis hin galle karaa itti cufuu qaba Efesoon 4: Du’a hafuuraa, walitti dhufeenyi hafuuraa namni tokko Waaqayyoo wajjin qabu du’uusaati Seera Uumamaa 2: Retrieved from ” https: Akka Luba Salamoonitti duraan kiristaanumaa biraatu waggoota mscaafa ture.
Achumaan dhugaawwan Macaafa Quqlulluu keesatti ibsaman itti fufnee jalqabarratti haala Waaqayyoo, isa jalqabumaa kaasee jiraatee fi Macaafa Quqlulluu harka namootaatiin oomishee ilaalla. Ilmi bara-baraa foon namaatiin in dhalate Isaayyaas 9: Inni waggaa kuma tokkoof seexana hidhuudhaan diinota isiraa’el in moo’a Mul’ata Sababuma dhugaa kanaatiin dhagnchi amantootuma qofaadhaan walitti qabamee waldaan kiristaanaa Inni dhugaa tokko amantootaafi gurmuu amantootaatiin oroomoo isheef ta’a, garuu immoo tarii otuu hin beekamin miseensota ishee keessaa warra hin amanne of keessatti qabachuus in malti Maatewos Onesmoos erga umurii ijoollummaa isaatii kaasee ummata Oromoo keessa jiraachaa waan hin turiniif jechoota fi jechamoota baayyee wan sirriitti hin beekneef gargaarsa isa barbaachise.
Kun attamiin uumamuu akka danda’e hayyootni amantaa ni ibsu.
Kanneen amanan deebisee in dhaabe Yoh.
Next story GOST 8509-93 PDF
Previous story LCN 4642 PDF